လစ်လပ်နေတဲ့ တရားရုံးချုပ် တရားသူကြီးနေရာအတွက် သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့် အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားတဲ့ Amy Coney Barrett ကို ရီပတ်ဘလစ်ကင်တွေ ကြီးစိုးတဲ့ အထက်လွှတ်တော်တရားရေးကော်မတီက ကြာသပတေးနေ့မှာ အတည်ပြုပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပြီး ဒါကို အထက်လွှတ်တော် တရပ်လုံးအနေနဲ့ ဆက်လက်စဉ်းစားဆုံးဖြတ် ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကွယ်လွန်သူ တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီး Ruth Bader Ginsburg နေရာအတွက် အစားထိုးခန့်အပ်ဖို့ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ သိပ်နီးကပ်နေချိန်မျိုးမှာ လုပ်ဆောင်တာကို ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက ကန့်ကွက်ကြောင်း အထက်လွှတ်တော် ဒီမိုကရက်ခေါင်းဆောင် Chuck Schumer က ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး ဒီရာထူးအတွက် နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် ရွေးကောက်ပွဲ အပြီး အနိုင်ရတဲ့ သမ္မတကပဲ ရွေးချယ်သင့်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
၂၀၁၆ တုန်းကလည်း သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် တရားရုံးချုပ် တရားသူကြီးနေရာ လစ်လပ်သွားတဲ့အတွက် အဲဒီအချိန်က သမ္မတဖြစ်တဲ့ Barack Obama က တရားသူကြီး Merrick Garland ကို အမည်စာရင်း တင်သွင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပေမယ့် နောက်တက်လာတဲ့ သမ္မတကပဲ ရွေးချယ်သင့်ကြောင်း အလားတူ အငြင်းပွါးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးတဲ့ အထိ စောင့်ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခု Barrett အတွက် အတည်ပြုရေး လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ သိပ်ကို အလောတကြီးနိုင်ပြီး ပါတီစွဲကြီးကြီးနဲ့ လုပ်ဆောင်တာ ဖြစ်နေသလို တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီး အတွက် အမည်စာရင်း တင်သွင်းတဲ့ တရားဝင်လုပ်ထုံး လုပ်နည်းအနည်းပါးဆုံး ဖြစ်နေတယ်လို့လည်း Schumer က ပြောပါတယ်။
အမည်စာရင်း အတင်သွင်းခံရတဲ့ တရားသူကြီး Barrett အတွက် အတည်ပြုရေး မဲခွဲမှုကို ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက သပိတ်မှောက်ခဲ့တာဟာ အကျိုးမဲ့စေတဲ့ လုပ်ရပ်တခု ဖြစ်ကြောင်း နဲ့ သူမဟာ တရားရုံးချုပ်နဲ့ထိုက်တန်သူဖြစ်သလို ဒီရာထူးအတွက် အတည်ပြုခံရမှာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း တရားရေးကော်မတီအကြီးအကဲ Lindsey Graham ကပြောပါတယ်။ အထက်လွှတ်တော်မှာ ရီပတ်ဘလစ်ကင်တွေက အမတ် ၅၃ နေရာနဲ့ ဒီမိုကရက်တွေက ၄၇ နေရာရှိတာကြောင့် သူမကို အတည်ပြုဖို့ များနေတာပါ။
သူမကို အတည်ပြုရေးအတွက် တနင်္လာနေ့မှာ နောက်ဆုံးမဲခွဲ ဆုံးဖြတ် နိုင်အောင် အထက်လွှတ်တော် တရပ်လုံးရဲ့ မဲခွဲမှုကို တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ကျင်းပဖို့ အထက်လွှတ်တော် အမတ်အများစုခေါင်းဆောင် Mitch McConnell က စီစဉ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့. တရားရုံးချုပ်အတွက် တသက်တာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ Barrett ကို အတည်ပြုခဲ့မယ် ဆိုရင် တရားရုံးချုပ်မှာ ရှေးရိုးဆန်တဲ့ ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေက လစ်ဘရယ်ဖြစ်သူတွေထက် ၆ ယောက် ၃ ယောက်နဲ့ အသာစီးရသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တရားရုံးခြုပျ တရားသူကွီးနရောအတှကျ Amy Coney Barrett ကို ကနျအထကျလှနျတျော တရားရေးကျောမတီအတညျပွု
လဈလပျနတေဲ့ တရားရုံးခြုပျ တရားသူကွီးနရောအတှကျ သမ်မတဒျေါနယျထရမျ့ အမညျစာရငျးတငျသှငျးထားတဲ့ Amy Coney Barrett ကို ရီပတျဘလဈကငျတှေ ကွီးစိုးတဲ့ အထကျလှတျတျောတရားရေးကျောမတီက ကွာသပတေးနမှေ့ာ အတညျပွုပေးလိုကျပွီဖွဈပွီး ဒါကို အထကျလှတျတျော တရပျလုံးအနနေဲ့ ဆကျလကျစဉျးစားဆုံးဖွတျ ရတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။
ကှယျလှနျသူ တရားရုံးခြုပျတရားသူကွီး Ruth Bader Ginsburg နရောအတှကျ အစားထိုးခနျ့အပျဖို့ ရှေးကောကျပှဲကငျြးပဖို့ သိပျနီးကပျနခြေိနျမြိုးမှာ လုပျဆောငျတာကို ဒီမိုကရကျတဈပါတီက ကနျ့ကှကျကွောငျး အထကျလှတျတျော ဒီမိုကရကျခေါငျးဆောငျ Chuck Schumer က ထပျလောငျး ပွောကွားခဲ့ပွီး ဒီရာထူးအတှကျ နိုဝငျဘာ ၃ ရကျ ရှေးကောကျပှဲ အပွီး အနိုငျရတဲ့ သမ်မတကပဲ ရှေးခယျြသငျ့တယျလို့ ပွောပါတယျ။
၂၀၁၆ တုနျးကလညျး သမ်မတရှေးကောကျပှဲမတိုငျခငျ တရားရုံးခြုပျ တရားသူကွီးနရော လဈလပျသှားတဲ့အတှကျ အဲဒီအခြိနျက သမ်မတဖွဈတဲ့ Barack Obama က တရားသူကွီး Merrick Garland ကို အမညျစာရငျး တငျသှငျးခဲ့တာ ဖွဈပမေယျ့ နောကျတကျလာတဲ့ သမ်မတကပဲ ရှေးခယျြသငျ့ကွောငျး အလားတူ အငွငျးပှါးခဲ့တာဖွဈပွီး ရှေးကောကျပှဲ ပွီးတဲ့ အထိ စောငျ့ခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။
အခု Barrett အတှကျ အတညျပွုရေး လုပျဆောငျခကျြတှဟော သိပျကို အလောတကွီးနိုငျပွီး ပါတီစှဲကွီးကွီးနဲ့ လုပျဆောငျတာ ဖွဈနသေလို တရားရုံးခြုပျတရားသူကွီး အတှကျ အမညျစာရငျး တငျသှငျးတဲ့ တရားဝငျလုပျထုံး လုပျနညျးအနညျးပါးဆုံး ဖွဈနတေယျလို့လညျး Schumer က ပွောပါတယျ။
အမညျစာရငျး အတငျသှငျးခံရတဲ့ တရားသူကွီး Barrett အတှကျ အတညျပွုရေး မဲခှဲမှုကို ဒီမိုကရကျတဈပါတီက သပိတျမှောကျခဲ့တာဟာ အကြိုးမဲ့စတေဲ့ လုပျရပျတခု ဖွဈကွောငျး နဲ့ သူမဟာ တရားရုံးခြုပျနဲ့ထိုကျတနျသူဖွဈသလို ဒီရာထူးအတှကျ အတညျပွုခံရမှာ ဖွဈကွောငျးလညျး တရားရေးကျောမတီအကွီးအကဲ Lindsey Graham ကပွောပါတယျ။ အထကျလှတျတျောမှာ ရီပတျဘလဈကငျတှကေ အမတျ ၅၃ နရောနဲ့ ဒီမိုကရကျတှကေ ၄၇ နရောရှိတာကွောငျ့ သူမကို အတညျပွုဖို့ မြားနတောပါ။
သူမကို အတညျပွုရေးအတှကျ တနင်ျလာနမှေ့ာ နောကျဆုံးမဲခှဲ ဆုံးဖွတျ နိုငျအောငျ အထကျလှတျတျော တရပျလုံးရဲ့ မဲခှဲမှုကို တနင်ျဂနှနေမှေ့ာ ကငျြးပဖို့ အထကျလှတျတျော အမတျအမြားစုခေါငျးဆောငျ Mitch McConnell က စီစဉျထားတာ ဖွဈပါတယျ။ တကယျလို့. တရားရုံးခြုပျအတှကျ တသကျတာ တာဝနျထမျးဆောငျဖို့ Barrett ကို အတညျပွုခဲ့မယျ ဆိုရငျ တရားရုံးခြုပျမှာ ရှေးရိုးဆနျတဲ့ ကှနျဆာဗေးတဈတှကေ လဈဘရယျဖွဈသူတှထေကျ ၆ ယောကျ ၃ ယောကျနဲ့ အသာစီးရသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။